GitHub na GitLab: uru na ọghọm nke nyiwe ndị a | Site na Linux
GitHub na GitLab: uru na ọghọm nke nyiwe ndị a
Isaac | | Mmemme
Ọ bụ ezie na ha abụọ nwere myirịta, ọbụlagodi aha nke malitere na Git n'ihi na ha abụọ dabere na ngwa njikwa ama ama ama ama nke Linus Torvalds dere, mana ọ bụghị otu ma ọ bụ nke ọzọ bụ otu ihe. Ya mere, onye mmeri nke agha GitHub na GitLab abụghị nke doro anya, ha nwere ụfọdụ esemokwu dị iche iche na-eme ka ha nwee uru na ọghọm ha maka ndị ọrụ na ndị mmepe na-ejikarị ha eme ihe.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị mmepe agbagoro GitLab n'oge na-adịbeghị anya, yana nsonaazụ ọma ya na nke ọjọọ nke ị ga-amata ugbu a. Ihe kpatara mmemme a bụ ịzụta nke ikpo okwu GitHub site na Microsoft, na obi abụọ nke a kpatara. Mana ikwu eziokwu, ikpo okwu a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ugbu a ...
1 Gịnị bụ Git?
2 Gịnị bụ GitHub?
3 Kedu ihe bụ GitLab?
4 GitHub na GitLab
4.1 GitHub na GitLab iche
4.2 Uru na ọghọm nke GitLab
4.3 Uru na ọghọm nke GitHub
Gịnị bụ Git?
Git bụ sọftụwia njikwa njikwa nke Linus Torvalds chepụtara maka kernel Linux, ka mmemme ndị ọzọ yiri ya emeghị ka o kwenye. Ọ bụ ezie na emere ya kpọmkwem maka ọrụ Linux, ọ gbasaa ugbu a na ọtụtụ ọrụ mmeghe ndị ọzọ maka uru ya.
Na mbu, edere ya na arụmọrụ, ntụkwasị obi, na ndakọrịta maka oru ngo ndi nwere otutu onu ogugu faịlụ koodu.
Dị ka ihe software nke njikwa njikwa, dịkwa ka VCS, Subversion, CVS, n'etiti ndị ọzọ, ọ bụ sọftụwia maka ijikwa mgbanwe emere na ihe nke koodu isi ma ọ bụ nhazi ya. N'ụzọ ahụ, otu ndị mmepe nwere onwe ha na-arụ ọrụ na ya nwere ike ịnwe njikwa ka mma ma ha agaghị arụ ọrụ ahụ ma ọ bụ mepụta nsogbu mgbe ha na-arụkọ ọrụ ndị a ...
Gịnị bụ GitHub?
GitHub bụ ikpo okwu mmepe, a na-akpọkwa forging. Nke ahụ bụ, otu ikpo okwu lekwasịrị anya na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị mmepe maka mgbasa na nkwado nke ngwanrọ ha (ọ bụ ezie na obere obere ejirila ya maka ọrụ ndị ọzọ karịrị sọftụwia).
Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-adabere na Sistemụ njikwa nnabata gam. Yabụ, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ na koodu isi nke mmemme ma mepụta usoro mmepe. Ọzọkwa, a na-ede n'elu ikpo okwu a na Ruby na Rails.
O nwere otutu oru mmeghe ghere oghe nke echekwara na ikpo okwu ya ma nweta ya n'ihu oha. Nke ahụ bụ uru ya na Microsoft họọrọ ịzụta nyiwe a na 2018, na-enye onyinye nke ihe na-erughị ijeri dollar 7500.
N'agbanyeghi obi abụọ banyere nzụta ahụ, ikpo okwu a gara n'ihu na-arụ ọrụ dịka ọ dị na mbụ, ọ ka na-adị otu n'ime ndị kasị eji. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa dị ka kernel Linux n'onwe ya ...
Kedu ihe bụ GitLab?
GitLab bụ ihe ọzọ dị iche na GitHub, saịtị ọzọ na-arụ ọrụ na ntanetị yana usoro njikwa ụdị dabere na Git. N'ezie, e mepụtara ya maka ịkwado ọrụ mmeghe na-emeghe ma mee ka ndụ dịrị ndị mmepe mfe, mana enwere ụfọdụ iche na nke gara aga.
Weebụsaịtị a, na mgbakwunye na njikwa repository na njikwa njikwa, ọ na-enyekwa nnabata maka wikis, yana sistemụ nsị ahụhụ. Sulọ zuru ezu iji mepụta ma jikwaa ọrụ nke ụdị niile, ebe ọ bụ na, dị ka GitHub, a na-akwado ọrụ ndị na-agafe koodu isi mmalite.
Ọ bụ ndị mmepe Ukraine, Dmitry Zaporozhets na Valery Sizov dere ya, na-eji asụsụ mmemme Ruby na ụfọdụ akụkụ Go. Ka oge na-aga, ụlọ ya ka mma na Go, Vue.js, na Naa na Rails, dị ka ọ dị na GitHub.
N'agbanyeghị na amaara gị nke ọma na ọ bụ nnukwu ihe ọzọ na GitHub, ọ nweghị ọtụtụ ọrụ. Nke a apụtaghị na ọnụọgụ koodu anabatara dị nnukwu ukwuu, yana ụlọ ọrụ na-adabere na ya. site na mmasị nke CERN, NASA, IBM, Sony, Wdg
GitHub na GitLab
Onwe m, a ga m agwa gị na enweghị onye mmeri doro anya na GitHub na agha GitLab. Ọ naghị adị mfe ịhọrọ ikpo okwu dị elu karịa nke ọzọ, n'eziokwu, nke ọ bụla nwere ike na adịghị ike ya. Na ihe niile ga-adabere na ihe ị na-achọ n'ezie ka ị wee nwee ike ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ.
GitHub na GitLab iche
N'agbanyeghị myirịta niile, otu igodo mgbe ị na-ekpebi ntụnyere GitHub na GitLab nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti ha abua:
Nyocha ọkwa: GitLab nwere ike ịtọ ma gbanwee ikikere nye ndị ọrụ dị iche iche dịka ọrụ ha si dị. N'ihe banyere GitHub, ị nwere ike ikpebi onye gụrụ ma dee ikike na nchekwa, mana ọ nwere oke na nke ahụ.
uloỌ bụ ezie na nyiwe abụọ a na-enye gị ohere ịnabata ọdịnaya nke ọrụ ahụ na nyiwe n'onwe ha, n'ihe gbasara GitLab ọ nwekwara ike ịhapụ gị ịnabata nnabata gị, nke nwere ike ịbụ uru na ụfọdụ GitHub agbakwunyela atụmatụ ahụ, mana ọ bụ naanị na atụmatụ ụfọdụ akwụ ụgwọ.
Bubata na mbupụ: GitLab nwere ozi zuru oke banyere otu esi ebubata oru ngo iji mee ka ha si n'otu ikpo okwu gaa na nke ọzọ, dị ka GitHub, Bitbucket, ma ọ bụ weta ha na GitLab. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bupụ, GitLab na-enye ezigbo ọrụ siri ike. N'ihe banyere GitHub, ọ dịghị akwụkwọ zuru ezu a na-enye, ọ bụ ezie na a pụrụ iji GitHub onye na-ebubata ya dị ka ngwá ọrụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịmachikwu iwu ma a bịa n'ịbupụ.
Obodo- Ha abụọ nwere ezigbo obodo n'azụ ha, ọ bụ ezie na GitHub yiri ka ọ meriri agha ahụ na ewu ewu. Ọ na - ezukọta ọtụtụ nde ndị mmepe ugbu a. Ya mere, ọ ga-adị mfe ịchọta enyemaka na nke a.
Versionsdị nsụgharị: Ha abụọ na-enye ha ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ ahụ, yabụ i nwere ike iche na ntụnyere GitHub na GitLab enweghị isi ugbu a, mana nke bụ eziokwu bụ na GitLab na-enye ụfọdụ atụmatụ na-adọrọ mmasị, ma bụrụ ihe ama ama n'etiti ndị otu mmepe nnukwu.
Na nkenke, ihe dị iche GitHub na GitLab chịkọtara na ị nwere ha na tebụl a:
Inicio Septemba nke 2011 Eprel 2008
Atụmatụ efu Unlimited ọha na onwe nchekwa Na-akwụ ụgwọ naanị maka ebe nchekwa ọha
Plansgwọ atụmatụ Site na $ 19 kwa onye ọrụ kwa afọ maka Atụmatụ adịchaghị. Ma ọ bụ $ 99 kwa onye ọrụ kwa afọ maka Ultimate. Malite na $ 4 kwa onye ọrụ na afọ maka Team, $ 21 maka Enterprise, ma ọ bụ karịa maka Otu.
Ọrụ nyochaa koodu ee ee
Wiki ee ee
Eriri nsuso na nsogbu ee ee
Alaka ụlọ ọrụ ee ee
Mee usoro ee ee (soro ọrụ nke atọ)
Bubata oru ee Mba
Mbupụ ọrụ ee Mba
Oge nyocha ee Mba
Ntanetị weebụ ee ee
Nchịkọta onwe ee ee (ya na atụmatụ azụmahịa)
. Ewu ewu Ọrụ 546.000 + Ọrụ 69.000.000 +
Uru na ọghọm nke GitLab
Ozugbo a maara ọdịiche na myirịta dị n'etiti GitHub na GitLab, uru na ọghọm dị na nyiwe ndị a ha nwere ike inyere gị aka ikpebi.
Atụmatụ efu na-enweghị mmachi, ọ bụ ezie na ọ nwere atụmatụ ịkwụ ụgwọ.
Ọ bụ ikike ikike emeghe.
Na-enye gị ohere ịnabata onwe gị na atụmatụ ọ bụla.
Ejikọtara ya na Git nke ọma.
Njikọ ya nwere ike ịdị nwayọ nwayọ karịa asọmpi ahụ.
Enwere ụfọdụ nsogbu na-echekwa na ntinye ego.
Uru na ọghọm nke GitHub
N'aka nke ọzọ, GitHub nwekwara nke ya Uru na ọghọm, nke ndị na-esonụ na-apụta:
Free ọrụ, ọ bụ ezie na ọ na-akwụ ụgwọ ọrụ.
Nnyocha ngwa ngwa na nhazi usoro.
Nnukwu obodo ma dị mfe ịchọta enyemaka.
Ọ na-enye ngwaọrụ dị irè maka imekọ ihe ọnụ na ịdị mma na Git.
Ọ dị mfe ijikọta na ọrụ ndị ọzọ nke atọ.
Ọ na-arụkwa ọrụ na TFS, HG na SVN.
Ọ bụ nnọọ na-emeghe.
O nwere oke ohere, ebe ị gaghị agabiga 100MB na otu faịlụ, ebe nchekwa na-ejedebe na 1GB na mbipute n'efu.
Dị ka ị hụrụ ọ dịghị onye mmeri doro anya. Nhọrọ ahụ adịghị mfe ma, dịka m kwuru, ị kwesịrị iji nlezianya nyochaa uru, ọghọm na esemokwu nke onye ọ bụla iji nwee ike ịmata nke kachasị mma maka mkpa gị.
Onwe m ga - agwa gị na ọ bụrụ na ịchọrọ inwe gburugburu mepere emepe, jiri GitLab mee ihe ka mma. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọọ ụlọ ọrụ karịa ma jiri ọrụ weebụ yana ọnụnọ dị ukwuu, wee gaa GitHub. Ga-agụnye onye nke atọ a ga m agwa gị na ọ bụrụ na ị na-achọ ịrụ ọrụ na ọrụ Atlassian ị kwesịrị ile anya n'akụkụ Bitbucket...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » GitHub na GitLab: uru na ọghọm nke nyiwe ndị a
Ọ na-ewute m nke ukwuu mgbe enwere ọnọdụ, na ịbụ onye ọrụ nke ma echere m na ọ dị mkpa iburu n'uche na GitHub nweere onwe ya maka ụlọ nchekwa ọha na nke onwe ya n'ụzọ na-enweghị njedebe.
Ọ bụrụ na enwere oke, mana n'ezie maka ọrụ n'efu enwere m ike ịchọta ya karịa GitLab na Bitbucket, nke m bụkwa onye ọrụ, ọkachasị maka nsogbu obodo, dị ka a ga - asị na ọ pụtara na ndetu ahụ.
Na mkpokọta, ihe edeturu dị ezigbo mma, mana ọ na-ewute m na a na-ahụkarị ihe a.
Zaghachi Eugenio Miró
AOS-P3: Explochọgharị nnukwu Apple Open Source - Nkebi 3